Dhibaatada calool istaaga. Calool istaaga caruurta
Calool istaaga caruurta
May 23, Caafimaadka. Halkan waxaan inshaAllah ku ban dhigi doonaa saliidaha kala duwan oo u fiican caafimaadka xaga cunida iyo daryeelka maqaarkaba. Wiig walba hal saliid baan soo qaadan doonaa habka loo isticmaaloduxda ku jirta iyo siyaabaha kala duwan ee layskugu daryeeli karo. Wanaaga iyo waxtarka ay leeyihiin saliidaha kala duwan ee caafimaadka, jidhka iyo timahaba u fiican. Sida saliid oliven oil, avocado oil, argan oil, almond oil iyo qaar kale oo badan. Saliidaha qaarkood waa kuwo xagga Sunnada Nabiga scw laga helayo oo uu Nabigu scw ku dawyan jiray dadka. Halka qaar badana la ogaaday waxtarkooda si hab cilmi baadhis ah. Saliidaha aan hoos ku soo qaadan doona waxa ay aad uugu fiican yihiin maqaarka, timaha iyo waliba in ay qaarkood ilkaha lagu cadayn karo iyo in ay ka qayb qaataan nadaafada afka. Waxa ay qani ku yihiin oo Allah swt ku manaystay saliidahan dufan dabayci ah oo caafimaadka aad uugu fiicandufan kaas oo waliba ah dufanka qabta vitamins yada dufanka ku dhaga, isla markaana ma aha dufan jidhka ama maqaarka cufaya oo daloolada jidhka awdaya. Saliidahan intooda badan wax badan way ka siman yihiin oo si dagdag ah bay u dhex galaan timaha ama maqaarka. Marka la isticmaalo waxyaabaha jidhka lagu maydho ama lagu nadiifyo oo chemical cosmetics ah waxay jidhka ku sameeyaan in ay maqaarka ka suuriyaan dufanka dabayciga ah, ka dibna waxa jidhka ku dhaca qalayl ama jafaaf iyo sidii in jidhka la kala jiidayo oo kale, taasni waxay jidhka ku keentaa in uu maqaarku dhaliyo saliid fara badan si uu iskaga difaaco dhibaatada soo daristay. Haddaba xaqiiqdu waxa ay tahay haddii aad isticmaashid saliida wanaagsan oo aad iska daysid wax yaabaha costamics ka maqaarka dhib u keenaya in saliidahaasi ay maqaarka ku caawiyaan in uuu jidhku ilaashado dufankiisa dabayciga ahdhibaatana ka badbaado. Saliidahan marwalba waa la isticmaali karaa, xitaa habeenkii. Jidhkuna ma waayayo in uu maqaarku neefsado maadama ayna daloolada xidhaynin. Sida uugu fiican ee loo isticmaali karo daryeelka maqaarkana waa marka uu jidhku qoyan yahay in aad markiiba saliidaha wanaagsan aad kuwa kuugu naasibka badan aad jidhka marisaa. Jidhku marka uu qoyan yahay bu uga qaadasho badan yahay duxda ku jirta saliidaha marka uu qalalan yahay. Runtiina maaha wax lacag badan kugu jooga. Wax badana uuma baahnid in aad ku dhabooqdid maqaarka. Marka aad marsatid saliidahan waxa aad dareemaysa isla markiiba dhalaal, soft iyo in wax iska soo badalayaan. Saliidaha laga sameeyey dhirta, midhaha, khudrada ama ubaxa waxa ay qani ku yihiin vitamino, minerals iyo dufanka wanaagsan een caafimaadka waxba u dhibin. Isla markaana waxay ka qayb qaataan quruxda, bilicda iyo caafimaadka jidhka. Saliida oliven ama saliid zaytuun waxa ay ka baxdaa waddama bariga dhexe ama waddama cimilada kulul leh.
Sida uu tilmaamay khabiir islaam ah oo la odhan jiray Inb Al Qayyim, ilaalinta caafimaadku waa saddex dariiqo mid ahaan:. Khubarada caafimaad ee casriga ah waxa ay sheegeen in caafimaadka qofku wanaagsanaanayo haddii uu isticmaalo cuntooyin nafaqo leh oo dheelitiran, jidhkana laga ilaaliyo waxyaabaha sunta ah amma waxyeelada u keena iyo jidhka laga saaro suntan Detoxify ku jira amma walxaha cudurka keeni kara ee ka dhasha cuntooyinka iyo hab nololeedka noolaha. Sidoo kale mararka qaar waxa uu cuni jiray Rasuulku timir uu cabitaan ku liqi jiray, subaxnimada horena waxa caado u ahayd inuu dhawr xabbo oo timir ah cuno, gaar ahaan inta aannu salaada subax tukan. Marka uu waayo timir cusub waxa uu cuni jiray mid qalalan. Inta badan dadka aan timirta darayga ah cunin waxa ay u nugul yihiin nabarada caloosha ku dhaca amma dhiiggooda ayaa si fudud u kara, taasina waxa ay ku keentaa madax-xannuun iyo in jidhkiisu uu dheelitiranku ka maqnaado. Sidoo kale, waxa Nebiga laga soo weriyey in mararka qaar uu isticmaali jiray timir lagu daray subag, roodhi iyo kaligeedba. Inta badan waxa ay cunista timirtu fiican tahay waqtiyada kulaylaha lagu jiro. Xabaasuuda amma midhaha madaw ee kulul waa midho laga helo geed ubaxeed la yidhaa Nigella Stiva oo ka mid ah bahda dhir duxeedka ah ee la yidhaa Buttercup. Geedkan waa geed marka uu baxo dherar ahaan gaadha iinj incheskadibna bixiya ubax buluug midabkiisu yahay. Waxa kale oo ka baxa midho madaw oo ah kuwa xabaasuuda loo yaqaan, meelaha qaarna looga yaqaan siidhkii barakaysnaa amma iniinyihii barkaysnaa, halka dadka qaarna u yaqanaan Siidhkii Carabeed, maadaama uu aad uga baxo dhulka Carabta. Xabaasuda magacyo kala duwan baa looga yaqaana meelo badan oo adduunka ah, waxaana laba kun oo sannadood ka hor loo isticmaali jiray siyaabo kala gedisan oo ay ugu horrayso daawo ahaan. Midhahan waxa laga tuujiyaa saliid oo mararka qaarna daawo laga sii sameeyo, kuwaasoo daawo ka ah xannuunada ku dhaca neef-mareenka iyo qufacaba. Waxa kaloo loo isticmaalaa in lagu daweeyo jidh xannuunka, hab-dhiska dheef-shiidka ay ka caawiso in la burburiyo suntan jidhka ku jirta, xubnaha kaadi-mareenka in ay fududayso in kaadida ay dibadda u soo saaraan, in jidhku u adkaysto dabaysha, xannuunada caloosha ku yimaada oo dhan waa ka dawo. Waxa kale oo lagu dilaa dirxiyada ku dhasha caloosha, maqaarka cuncunka ku yimaada iyo waliba hooyada oo ku caana badisa marka ay isticmaasho, sida ay iftiimiyeen dhakhaatiirta baadhay. Haddii qofku dhawr dhibcood oo iniinyahan saliida laga miiro ah ku darsado kafeega amma shaaha waxa ay ka caawisaa in cawaasiiftiisu degto calm the nervious systemqufaca uu ka bogado, asmada amma xiiqdu ka yaraato iyo waliba in uu ka badbaado xannuunada neef-mareenka ku dhaca haddii Ilaahay sidaas qadaro, balse haddii qofku si dheeli tiran ah u cuno amma uu iska badiyo waxa ay ku keentaa in dheef-shiidka calooshu khalkhalo. Waa dawo uu Nebi Muxamed ummadiisa ku dhiirigeliyey in ay isticmaasho. Xabaasuuda waxa loo isticmaali karaa in lagu daweeyo dhibaatooyin macaanka ka dhasha, sababtoo ah waxa ay hoos u dhigtaa sonkorta dhiigga. Saamaynta Caafimaad ee Xabaasuuda. Saamaynta amma dhibaatada laga dhaxlo waa mid muddo dheer, dhexe iyo dheerba noqon karta. Inta badan xabaasuuda looma oggolaado gabadha uurka leh oo dhib ayeyy ku keentaa…. Saied Al-Ansari Allah ka raali ahaadee wuxuu Nabiga scw ka soo wariyey in uu yidhi: Cuna, kuna duuga jidhkiina markaad heshaan maadama uu yahay geed barakaysan.
Dhalinyarada xamaasadooda waa sida shidaalka oo kale. Oraahyada hal abuurka ah saameyn weyn ayay ku yeelataa dadka dhageysta. Dhibaatada ugu weyn oo jirta waxay tahay in dhalinyarada ay fikrad qalad ah ka fahamsan yihiin ganacsiga bilowgiisa. Marka sidii looga dhaadhicin lahaa fikradaha qaldan, kalsoonina loo gelin lahaa waxay u baahan tahay dadaal wadareed. Marka waxaan ku boorinaynaa dadka qibradda u leh curinta gabayada, maansooyinka, geeraarada, buraamburka, maahmaahyada, halqabsiyada IWM in ay curiyaan hal abuuryo ku dhiiri gelinaysa dhalinyaradeena wax soo saarka, ganacsiga iyo waxbarashada. Waxaa halqabsi laga dhigtaa in shimbirta markay baranayso buubitaanka, kor intay u boodo ayay soo dhacdaa marar badan. Marka ganacsatada waxaan ku boorinaynaa in ay:. Suuqyada, dhaqaalaha laga helo ka sokoow, waxay door ka ciyaaraan isku xirida iyo wada noolaanshaha mujtamaca kala duwan uu wadanku leeyahay. Suuqyo badan dagaalada sokeeya ka hor jiri jiray oo aan dib loo furin ayaa jira. Waxaa haboon in caruurta markay dugsiga hoose dhiganayaan lugu dhiiro geliyo ganacsiga, farsamada gacanta iyo iqtiraaca. Sidoo kale Jaamacadaha laga barto ganacsiga waa in ay ardada u baraan ganacsiga si sahlan oo jecleysiinaysa ganacsiga, kalsoonina ku abuuraysa. Waxaa arkaysaa dad badan oo aan jaamacad dhigan ama jaamacadda dhex ku dhaafay oo ganacsiga heer weyn ka gaaray. Waxaa haboon Diyaasbarada reerahooda wax u dira kaalmada, in dhalinyarada reerka ay ku dhiiri geliyaan ganacsiga. More on Bazi Bussuri Sheekh. Re-evaluating our Marriage to Re-invent our Nation 19 March More Posts. Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in uu is karantiilay Somali 13 April Hirshabelle oo Wasaaradda Caafimaadka ka dalbatay qalabka lagu baaro Coronavirus Somali 13 April Kiisas hor leh oo caawa laga xaqiijiyay Magaalada Muqdisho Somali 12 April Qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Israa'iil oo wali aan la Xalin Caalamka 12 April Dowlada Sri Lanka oo amar adag ka soo saartay sida laga yeelayo dadka u dilay cudurka Corona Caalamka 12 April
Post a Comment. Marxaladaan waxaa lakulma qof walba xiliyada kala duwan ee noloshiisa, xiidmaha qofka waxay sameeyaan dhaqdhaaq maalin kasta ugu yaraan 2 ilaa 3jeer, dadku waa ay ku kala duwanyihiin dhaqdhaqaaqaan, qof ayaa laga yaabaa inuu 3 jeer ama laba jeer suuliga aado maalintii halka qofkale laga yaabo inuu aado 2 ama 3jeer isbuucii. Calool istaagu waa markii uu yaraado dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan xiidmahu, waxaana qofku uusan aadin suuli ugu yaraan 3maalmood. Abitayt xumo, kansarka ku dhaca kolonka, fadhiga badan, daawooyinka qaar sida antacids ka kooban calcium iyo aluminum. Uurka, walwalka xad dhaafka ah, neeerfayaasha ama muruqyada caloosha oo si fiican u shaqaynayn, xanuunada ku dhaca xiidmaha irritable bowel disordersbiyaha oo aan xadi kugu filan aadan cabin, xanuunada ku dhaca neerfayaasha sida Parkinson disease iyo multiple sclerosisintuba waa sababo aan la dhayalsan Karin oo uu leeyahay calool istaagu. Calaamadaha: calaamadaha calool istaaga waxaa kamida; dhaqdhaqaaq yaraan laga dareemo xiidmaha iyo caloosha oo soo waynaata, dibiro, cunada oo kaa hor imaata, saxarada oo kugu dhagta, qofka oo dareema in saxaradu aysan soo wadan dhamaan, matag, iyo baabasiir caabuq. Daawada: Calool istaagu maahan xanuun, waa cilad kooban oo lagu xalin karo qaabab badan oo aan daawo u baahnayn inta badan, biyaha badan oo lacabaa iyo cunada oo la isu dheelitiro waa tiirarka muhiimada koowaad u leh daawaynta calool istaaga. Jimicsiga iyo socodku iyaguna waa qodobo lama huraan u ah daawaynta calool istaaga. Caafimaadka guud oo aad ilaashato waxay yaraynaysaa jaaniska aad ula kulmi kartid calool istaag. Posted by UnknownPublished at PM and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post. Xulka Isbuucaan galmada. Dumarka ugu Cambarka macaan waa kuwa leh astaamahan wax ka baro. Gabdhaha ninka ku niikiyo Xubinta xiliga galmada War-bixin. Naaska Haduu kaa jilcay sidaan ayaad ku adkeen kartaa. Dumarka ugu siil macaan Halkaan Ka Baro. Dhuuqmada Siilka Dumarka. Powered by Blogger.
Iyo in jidhka laga fogeeyo amma laga ilaaliyo waxyaabaha dhibta u keena. Khubarada caafimaad ee casriga ah waxa ay sheegeen in caafimaadka qofku wanaagsanaanayo haddii uu isticmaalo cuntooyin nafaqo leh oo dheelitiran, jidhkana laga ilaaliyo waxyaabaha sunta ah amma waxyeelada u keena iyo jidhka laga saaro suntan Detoxify ku jira amma walxaha cudurka keeni kara ee ka dhasha cuntooyinka iyo hab nololeedka noolaha. Sidoo kale mararka qaar waxa uu cuni jiray Rasuulku timir uu cabitaan ku liqi jiray, subaxnimada horena waxa caado u ahayd inuu dhawr xabbo oo timir ah cuno, gaar ahaan inta aannu salaada subax tukan. Marka uu waayo timir cusub waxa uu cuni jiray mid qalalan. Inta badan dadka aan timirta daraygaah cunin waxa ay u nugul yihiin nabarada caloosha ku dhaca amma dhiiggooda ayaa si fudud u kara, taasina waxa ay ku keentaa madax-xannuun iyo in jidhkiisu uu dheelitiranku ka maqnaado. Sidoo kale, waxa Nebiga laga soo weriyey in mararka qaar uu isticmaalijiray timir lagu daray subag, roodhi iyo kaligeedba. Inta badan waxa ay cunista timirtu fiican tahay waqtiyada kulaylaha lagu jiro. Xabaasuuda amma midhaha madaw ee kulul waa midho laga helo geed ubaxeed la yidhaa Nigella Stiva oo ka mid ah bahda dhir duxeedka ah ee la yidhaa Buttercup. Geedkan waa geedmarka uu baxo dherar ahaan gaadha iinj incheskadibna bixiya ubax buluug midabkiisu yahay. Waxa kale oo ka baxa midho madaw oo ah kuwa xabaasuuda loo yaqaan, meelaha qaarna looga yaqaan siidhkiibarakaysnaa amma iniinyihii barkaysnaa, halka dadka qaarna u yaqanaan Siidhkii Carabeed, maadaama uu aad uga baxo dhulka Carabta. Xabaasuda magacyo kala duwan baa looga yaqaana meelo badan oo adduunka ah, waxaana laba kun oo sannadood ka hor loo isticmaali jiray siyaabo kala gedisan oo ay ugu horrayso daawo ahaan. Midhahan waxa laga tuujiyaa saliid oomararka qaarna daawo laga sii sameeyo, kuwaasoo daawo ka ah xannuunada ku dhaca neef-mareenka iyo qufacaba. Waxa kaloo loo isticmaalaa in lagu daweeyo jidh xannuunka, hab-dhiska dheef-shiidka ay ka caawiso in la burburiyo suntan jidhka ku jirta, xubnaha kaadi-mareenka in ay fududayso in kaadida ay dibadda u soo saaraan, in jidhku u adkaysto dabaysha, xannuunada caloosha ku yimaada oo dhan waa ka dawo. Waxakale oo lagu dilaa dirxiyada ku dhashacaloosha, maqaarka cuncunka ku yimaada iyo waliba hooyada oo ku caana badisa marka ay isticmaasho, sida ay iftiimiyeen dhakhaatiirta baadhay. Haddii qofku dhawr dhibcood oo iniinyahan saliida laga miiro ah ku darsado kafeega amma shaaha waxa ay ka caawisaa in cawaasiiftiisu degto calm the nervious systemqufaca uu ka bogado, asmada amma xiiqdu ka yaraato iyo waliba in uu ka badbaado xannuunada neef-mareenka ku dhaca haddii Ilaahay sidaas qadaro, balse haddii qofku si dheeli tiran ah u cuno amma uu iska badiyo waxa ay ku keentaa in dheef-shiidka calooshu khalkhalo. Waa dawo uu Nebi Muxamed ummadiisa ku dhiirigeliyey in ay isticmaasho. Saamaynta amma dhibaatada laga dhaxlo waa mid muddo dheer, dhexe iyo dheerba noqon karta. Inta badan xabaasuuda looma oggolaado gabadha uurka leh oo dhib ayeyy ku keentaa… 3. Saliid Saytuun olive oil :Saied Al-Ansari Allah ka raali ahaadee wuxuu Nabiga scw ka soo wariyey in uu yidhi: Cuna, kuna duugajidhkiina markaad heshaan maadama uu yahay geed barakaysan. At-Tirmidhi, Ibn Maja Waxaa saliidan looga hortagi karaa cudurrada wadna, maadama ay saliidu hoos u dhigayso triglyceride ka dhiiga iyo waliba ka hortaga HDL cholesterol ka xun LDL ee xididada dhiiga subag jufan ku noqda. Haddii uu cholesterol ka xun iyo triglyceride ka dhiigu ay bataan waxaay keeni karaan cudurada ku dhaca wadna iyo agagaarkiisa iyo in ay curuuqda dhiigu isla xidhaan dufan awgeed. Ciladahaas oo keeni kara xididada guntama ama wadnna istaag ama madaxa oo dhiig ku furmoiwm. Waxa ay cilmi baadhistu tusaysaa dadka qaba dhiigkarkahaddii ay isticmaalaan saliidan zaytuunta in badan inaysan u baahnayn daawooyin faro badan. Arrinkanina maaha mid aad adigu ku dhaqmi kartid dhakhtarka oon kiula scon. Waxa ay saliidana ka hortagtaa cudurada sida cancer, sida breast, prostate, and rectal cancer. Xagga macaanka waxa ay saliidana aykontorooshaa sonkorta dhiiga. Maadama dhiigkarka iyo macaankunaxidhiidh leeyihiin ka hortag badan ayey saliidani arikaas ku leedahay. Xagga dheefshiida : Haddii cunto nadiif ah oo u badan khaluun iyo khudaar iwm aad cuntid ood waliba aad raacisid saliidan zaytuunta waxa ay ka hortagtaa cancel ka caloosha, waxa ayna kor u qaadaa caafimaadka beerka iyo waliba waxa ay ka qayb qaadataa nadaafada jidhku uu iska saara sunta jidhka gasha. Waxa kale oo ay saliidana dheefshiida faaiido way ugu tahay si ay in dheefshiidu si sahlan cuntada nafaqda uugala bixi karta. Waxayaaba kale ee ay saliidu uugu fiican tahay xaga dheefshiida waxaa ka mid ah in ay ka hortagto xanuunka xamaytida, nabarka caloosha iyo calool istaaga xagga midhicirada.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Cilmi baadhis ayaa lagu ogaaday in dhakhaatiirta iyo shacabku ay ku kala aragti duwan yihiin calaamadaha lagu garto calool istaagga, taasina ay sababto in dadka qaarkood aanay dhakhaatiirta uguba tagin in ay daweeyaan. Waxa cilmi baadhistaa lagu ogaaday in dhakhaatiirtu aaminsanyihiin in qofka oo wakhtiyada uu saxaroodaa ka yaraadaan saddex goor ay tahay calaamad muhiim ah oo muujinaysa calool istaagga. Koox ka tirsan Jaamacadda King's College ee London ayaa sheetay in loo baahanyahay in la helo qeexitaan cusub oo lagu xaddido waxa calool itaaggu yahay, iyadoo lagu salaynayo duruufaha dadka. Calool istaaggu waa xaalad dadka ku badan oo qiyaastii todobadii qof ba midkood qabo, dadkaas oo sidooda kale iskaga caafimaad qaba. Calool istaaggu waa in qofku ku dhibaatoodo inuu saxaroodo amaba uu xanuun dareemo marka uu fadhiisto, laakiin sida loo qeexayo ayaa lagu kala duwan yahay. Cilmi baadheyaashu waxay sheegeen in ay lixda hormo ee calaamadaha hoos ku qoran ahi gacan ka gaysan karaan in qeexitaan cusub loo helo calool istaagga:. Cilmi baadhista waxa lagu ogaaday in celcelis ahaan dadka aan calooshu taagnayni todoba goor saxaroodaan todobaadkiiba. Laakiin khuburadu waxay leeyihiin sida caadiga ahi waa in qofku maalintii saddex goor ama todobaadkii saddex goor saxaroodo. Markaa qofka ayay ku xidhantahay in uu fahmo sida calooshiisu tahay ee aanu dhibsanayn, ka dibna ka foojignaado wixii is bedel ah ee ku yimaad. Dadka badankooda ayaaba dareema in dhibaatada calool istaaggu hayso oo isku daya inay iska furdaamiyaan oo waxay cunaan cunto firiley u badan iyo cabbitaan badan, arintaasina waa sida ay ku talo bixiso wakaalada adeegga caafimaadka ee Ingiriisku. Cuntada firileyda ah wax aka mid ah roodhida laga dubo daqiiq laga sameeyey firiley aan buushigii laga saarin, khudradda, lawska iyo wixii la hal maala, digirta iyo firileyda kale. In uu qofku jimicsi sameeyo oo had iyo goorna joogteeyo aminta uu wax cunaa iyadna wax tar bay leedahay. Hadii tallaabooyinkaa aad waxba iskga garan weydo waxaad iibsan kartaa dawooyinka caloosha socodsiiya oo aad Farmasiiyada u doonan kartaa. Laakiin waxa muhiim ah in aad marka hore dhakhtar la tashato hadii aad astaamaha calool istaagga isku aragto oo cuntooyinka kor ku xusanina waxba kuu tari waayaan. Ma dhici kartaa in calooshu ku taagantahay oo aanad is ogayn? Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Astaamaha calool istaagga lagu garto dadku way ku kala duwan yihiin Cilmi baadhis ayaa lagu ogaaday in dhakhaatiirta iyo shacabku ay ku kala aragti duwan yihiin calaamadaha lagu garto calool istaagga, taasina ay sababto in dadka qaarkood aanay dhakhaatiirta uguba tagin in ay daweeyaan. Gadaal ilaa kor. Qodob kale oo Somali ah.
Started by Mumtaz19 Board Qaybta Su'aalaha. Started by Umuabdalla Board Qaybta Su'aalaha. Somali Medical Forums. Welcome, Guest. Please login or register. Home Help Login Register. Caloosha oo fadhido ama saxarada oo adag waa dhibaatada ugu wayn ee keento cillado badan oo ay ka mid tahay Baabasiirka. Waa maxay saxaro-adayg? Saxaro adayg ama Calool-fadhi waxaa loola jeedaa saxaro aad u adag ama in qofku si sahlan u saxaroon karin. Saxaro-adaygga waa cillad da' kasta ku dhacdo, inkastoo lagu kala duwan yahay laakiin qof aysan soo marin way yartahay. Waxaa sidoo kale laga yaabaa: In aad u baahato in aad iska soo riixdo Aad dareento in ay saxaradu kaa soo dhammaannin Aad qabtid casiraad, xanuun, dibbiro ama lalabbo Qof kasta wuu ka duwan qofka kale, laakiin dadka badankoodu waxay saxaroodaan inta u dhexeysa 3 goor maalintii ilaa 3 goor toddobaadkii. Ilaa iyo inta saxaradu ay jilicsan tahay ayna fududdahay in ay soo gudubto, markaas saxaradu kuma adka. Saxaro-adaygga dadka qaar muddo kooban ayay haysaa, dad kalane dhib ayay ku heysaa muddo dheer. Waa maxay asbaabta saxaro adayga keento? Cunto uu ku sarreeyo dufanka iyo sonkorto ama uu ku yar yahay buunshuhu Aadan cabbin cabitaanno kugu filan Aad noqoto qof aan fir-fircooneyn Aadan aadin musqusha marka ay saxaro ku qabato ama aad musqusha u baahan tahay Aad isticmaasho daawooyinka qaarkood oo saxarad adkeeyo Aad joogteyso isticmaalidda daawooyinka caloosha jilciya Haddii aad xanuunka niyad jabka ama diiqada aad qabtid Caruurta haddii ay ka cabsadaan musqusha ama isticmaalkeeda dhib ku yahay waxaa ku dhaca Saxaro-adayg Sidee looga hortagaa saxaro adayga? Cab ugu yaraan koob oo cabitaanno maalin kasta. Cabitaanno diirran ama kulul ayaa laga yaabaa in ay kaa caawiyaan in saxaradu ay si fudud kaaga timaaddo. Cun cuntooyin ay buunshuhu ku sarreeyaan sida siiriyaalka buunshaha leh, rootiyada miraha isu dhan ka sameysan, khudradda aan la karin, furutooyin cusub ama kuwo la engejiyey, looska iyo daangada. Buunshuhu wuxuu caawiyaa in saxaradu si fudud jidhkaaga u soo marto. Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in aad xaddiddo farmaajooyinka, shukulaatooyinka iyo ukunta maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ay sii xumeeyaan saxaro adayga. Cun tufaaxa si ay kaaga caawiyaan saxaro jilcan. Jir dhis samee si uu kaaga caawiyo in saxaradu si fudud kaaga timaaddo. Socodka si fiican ayuu wax uga taraa. Musqusha aad marka ay saxaro ku qabato si ay kuu dhaafto. Takhtarkaaga kala hadal ka hor inta aadan isticmaalin wax daawooyin caloosha jilciya oo farmashiga laga soo iibsado. Takhtarkaagu waxaa laga yaabaa in uu kuu soo jeediyo saxaro jilciye ama calool jilciye habboon. Haddii aadan ka helin daawada natiijooyinkii aad dooneysay, takhtarkaaga la xiriir. Waa maxay dhibaatooyinka Saxaro-adaygga ay keenaan? In neerfaha kontroola saxarada uu dhaawac gaaro oo qofku saxarada ceshan kari waayo. Jiirashada waxay keeni kartaa xanuunka futo-dillaaca: Ka akhriso halkaan waxa uu yahay Talo: Si dabiici ah u jilci calooshaada inta aadan daawo raadsanin adigoo raaca tillaabooyinka kor ku xusan, daawada waa xal ku meel gaar ah, haddii aad joogteysane iyadaa dhib kale kuu keenayso.
Started by Nuur12 Board Qaybta Su'aalaha. Somali Medical Forums. Welcome, Guest. Please login or register. Home Help Login Register. Sidee baan ku ogaan karaa in ilmahayga caloosha fadhido? Ilmahaaga waxay caloosha fadhidaa markii aad ku aragtid mid ama ka badan calaamadahan soo socda: 3 jeer ka yar ayuu saxaro dhigay muddo usbuuc ah. Saxaradiisu way adagtahay, qalalantahay wayna weyntahay Si dhib ah ayuu saxarada ku soo saaraa ama maba saxaroon karo. Hadii ilmahaagu ay dhibatada calool fadhigu ay haysay muddo ka badan 2 wiig, calool fadhigu wuu ku daba dheeraaday. Maxaa keena calool fadhiga? Calool fadhigu badanaa wuxuu ilmaha ku dhacaa markii aysan cabin biyo ku filan, caano ama cabitaano kalaba iyo hadii aysan qaadan cunto caafimaad leh kuwaasoo ay ku jirto maadada loo yaqaano faybarka Fibers sida qudaarta, furuutka, dhirmiroodka sida qamadiga, gallayda iyo bariiska. Hadii ilmahaagu uu cuno cunno ay ku badantahay sonkorta sida macmacaanka iyo cunto dufan badan leh waxay u keeni kartaa calool fadhi. Calool fadhigu wuxuu kaloo ilmaha yaryari ku dhici karaa markii naaska laga gooyo oo loo bilaabo caanaha lo'da ama cunno fudud aad ugu badashid cunno adag. Marmar calool fadhiga wuxuu ku dhici karaa ilmahaaga jirro kadib ama daawooyin la siiyay awgeed. Calool fadhigu yuusan kugu ridin welwel siyaado ah maxaa yeelay waa arin ku badan ilmaha badankood, wayna ka fiicnaadaan daawo la'aan. La soco waxa aan ka hadleyno waa calool fadhi kaliya aysan la socon dhibaatooyin kale. Maxaan sameyn karaa hadii ilmahaygu caloosha fadhido? Waxaa jira dhawr arrimood oo ilmahaaga aad u qaban kartid: Cuntada: ilmahaaga sii biyo ku filan iyo cunnada aan kor ku soo sheegnay oo u roon calool fadhiga. Tababar: Ilmahaaga ku tababar in uusan isku celin saxarada, uu markii uu u baahdaba uu kula socodsiiyo si aad u fahantid unala socotid waqtiyada ilmahaagu ubaahanyihiin in ay saxaroodaan. Daawada: waxaa jirta dhawr daawo oo loogu talagalay in ay caloosha socodsiiyaan, khiyaarka daawada waxaa xadidaya da'da ilmahaaga iyo calool fadhigooda heerka uu gaarsiisanyahay. U mahad celi ilmahaaga: Ilmaha waxa ay jecel yihiin in la abaal mariyo ama wax ay ku farxaan loo sameeyo mar walba uu tuunjiga ku fadhiisto waqtigii loogu talagalay, si ay u tababartaan adigane waqti xadidan oo aad ku kontorooli kartid ilmahaaga aad u heshid, iskana ilaali in ilmahaaga aad nacnac iyo waxyaabaha macaan aad abaalgud ahaan u siisid. Hadii calool fadhigu sii socdo ama uu ka soo roonaan waayo, ilmahaaga dhakhtar u geey si loo baaro, loona ogaado dhibka haya, maxaa yeelay calool fadhigu waxa marmarka qaar ay calaamad u noqon karaa cuduro helis ah. Dhakhtarku muxuu sameyn doonaa? Dhakhtarku waxa uu ku su'aali doonaa dhawr shey oo ay ka mid tahay, cunto qaadashada ilmaha, iyo hadii aad ku aragtay calaamado kale ee la socdo calool fadhiga sida is badal saxarada ku yimid, in dhiig la socdo ama axalo oo kale. Hadii ay la socoto calool xanuun ama uu ooynayo marka uu saxaro dhigayo. Dhakhtarku waxa uu baari doonaa ilmahaaga, saxaradane sheybaar baa loo diri doonaa, waxaana dhici karta in raajo caloosha laga saaro cunugaaga. In diagnosis think of the easy first. Martin H. Waxa aad arkayso oo ka soo jeedo cunugga waa malawadkii oo soo laalaado, waxaana ay ku dhacdaa caruurta haddii ay calooshoodu fadhiso in muddo ah oo si aad ahne iskugu dayaan in ay saxarada soo saaraan midaas ayaa keensanayso in meeshii saxarada soo mari jirtay ay banaanka u soo baxdo. Wuxuu badanaa ku dhacaa caruurta ka yar da'da 6 jirka ah iyo dadka duqooshinka ah. Waxaa lagu garan karaa waa wax gaduudan oo kuusan oo futada ka so raaraco khaas ahaan markii caruurta ay jiiranayaan, soo raaricista wuxuu noqon karaa in yar ama isaga dhan ayaa banaanka imaan karo. Markii uu yaryahay inta soo jeeddo, hadduu cunugga istaago ama jiirashada joojiyo waxaa laga yaabaa in gudaha uu ku noqdo oo uu qarsoomo. Sidee lagu xalliyaa? Abdullahi M. Igala Soco:. Calool fadhiga ilmaha waxaa looga caawin karaa talooyinka kor ku xusan, haddii intaa wax ka tari waydo waa in aad la xiriirisaa takhtarkooda si uu daawo ugu qoro.
Calool istaagga oo ah dhibaato ay dad aad u badani ka cawdaan, ayaa ay dhaakhtiirtu caddeeyeen in uu calaamad u noqon karo xaalad caafimaad darro oo qofka haysa, iyo in uu keeni karo xaalado khatar ah. Inkasta oo ay dadku ku kala duwan yihiin inta jeer ee uu qof kasta qashin qub samaynayo, haddana marka si guud loo qiimeeyo celcelis ahaan haddii qofku uu toddobaadkii wax saddex jeer ka yar saxaro u fadhiisto, isla markaana saxaradiisu ay tahay mid ingagan oo adag, ama uu mararka qaarkood dareemo in ay si dhib ah ku soo dhaafayso, waa calaamado uu ku garan karo in calool istaag uu hayo. Haddaba haddii dhaqdhaqaaqaas midhiciradu uu yaraado ama joogsado waxa uu macnaheedu noqonayaa in saxaradu ay muddo meel taagnaato. Taagnaantaas badanina waxa ay sababaysaa in midhiciradu ay ka nuugto biyo iyo macdano ka badan intii ay ka nuugi lahayd haddii ay saxaradu hore u dhaafayso. Sidaa awgeed ay aad u adkaato saxaradu. Waana markaas marka uu calool istaaggu dhacayaa. Waxa kale oo keeni kara qofka oo ay ku yaryihiin cuntooyinka galka leh iyo cabbitaanka biyuhu. Waxa ay khubaradu sheegayaan in galka cuntadu uu saxarada u sameeyo dhumuc, isla markaana uu midhicirada ku keeno dhaqdhaqaaqa. Halka biyuhuna ay ka hortagayaan in saxaradu ay ingagto. Mashquulka shaqooyinka waqtigan adduunka ka jira iyo waajibkaadka qofka saaran oo badan ayaa sababi kara in qofku uu muddo ka adkaysto tegista suuliga. Waxa kale oo dhacda in aanu waqti ku filan ku qaadan suuliga. Si ay midhiciradu u hesho waqti ay soo riixo saxarada. Waxaa jira dad waqti badan suuliga ka adkaysan kara iyaga oo u baahan; laakiin waxa aanay waxa aanay inta badan ogeyn in muddadaas ay saxaradu ku sii jirayso midhicirada, in midhiciradu ay wadato shaqadeedii ahayd in ay biyaha iyo macdanaha ka nuugto saxarada, taasina ay mar kasta sii adkaynayso siina ingajinayso saxarada. Sidaa awgeed saxarada oo muddo la xejisto ayaa iyaduna calool istaagga keeni karta. Saxaradu waxa ay ka qayb qaadataa gubista, xaydha iyo dufanka jidhka, laakiin, cilmi ahaanna waxaa la ogaaday in dawooyinka caloosha lagu jilciyo, oo ay ka mid yihiin kuwa sida shaaha loo isticmaalo, kuwa budada ah, dareeraha kuwa ah ama kiniinku, in qofka ay si degdeg ah saxarada uga keeni karaan. Balse ceebtoodu ay tahay in aanay gubayn dufanka iyo xaydha. Waxa ay dawooyinkani si aan dabiici ahayn oo xooggan u dhaqdhaqaajiyaan caloosha, si ay saxaradu u dhaqaaqdo. Sidaa awgeed dawooyinkan marka muddo dheer la isticmaalo, waxa ay qofka ku keentaa dhaawac. Dhibaatada kale ee dawooyinkani waa marka la joojiyo isticmaalkooda oo uu qofka ku dhaco calool istaag aad u darani. Sababtuna waa midhicirada oo joojinaysa dhaqaaqii dabiiciga ahaa, maadaama oo ay la qabsatay dhaqaajinta dawadu. Calool istaagga joogtada noqdaa waxa uu keenaa khataro caafimaad oo badan. Waxaa ka mid ah in qofku uu yeesho babaasiir, in qayb ka mid ah dhuunta saxaradu soo marto ee xagga dambe ay dibadda u soo dhaafto daloolka, in saxarada caloosha ku ururaysaa ay mar kasta sii adkaato illaa ay gaadho heer aanay midhiciradu si dabiici ah u soo saari karin, xitaa haddii dawooyinka calool socodsiinta la isticmaalo. Taas oo mararka qaarkood gaadha heer ay qasab noqoto in qofka qalniin lagu sameeyo, si saxaradaas bannaanka loogu soo saaro. Sida caadiga ah waxa uu qofku nolol maalmeedka si joogto ah ugala kulmaa cadaadisyo kala …. Your email address will not be published. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Dr Ali Mao - Waxyaabaha Keena CALOOL Xanuunka
Mpio tab missing
thoughts on “Dhibaatada calool istaaga”